माछा खोज्दा अजिङ्गर भेटिएपछि यस्तो भयो हालत – aajnepal
HomeRochakमाछा खोज्दा अजिङ्गर भेटिएपछि यस्तो भयो हालत
माछा खोज्दा अजिङ्गर भेटिएपछि यस्तो भयो हालत
February 8, 2019 aajnepal Rochak 0
भद्रपुर, २४ माघ । झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका– ४ मा माछा मार्ने क्रममा दुर्लभ अजिङ्गर भेटिएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख विष्णुलाल घिमिरेका अनुसार आज स्थानीयवासीले खोल्सीमा माछा मार्ने क्रममा अजिङ्गर फेला पारेका हुन् । आठ किलो तौल र ६ फिट लम्बाइ भएको सो अजिङ्गरलाई स्थानीयवासीले शनिश्चरे प्रहरी चौकीमा बुझाएका छन् । प्रहरी नायब निरीक्षक राजन खड्काले वन कार्यालयको निर्देशनमा अजिङ्गरलाई संरक्षणका लागि अर्जुनधारा–१ स्थित हलुवागढ सामुदायिक वनलाई हस्तान्तरण गरिने बताउनुभयो ।
रोचक घटना : दाइजोमा सर्प अनिवार्य
छोरीको विवाहमा दाइजो के दिइन्छ ? सामान्यतया नगद, सुनचाँदी, गरगहना, मोटरसाइकल, आदि इत्यादि तर विवाहमा दाइजोवापत सर्प नै दिनुपर्छ भन्ने सुन्दा अचम्म लाग्नसक्छ ।
तराईमा रहेका सपेराहरुमा छोरीको विवाहमा दाइजोवापत सर्प उपहार दिने परम्परा अझै कायम छ ।
नेटुवा जातिका सपेराहरुले आˆनै जातिका केटासँग छोरीको विवाह गर्दा केटा पक्षलाई दाइजोमा गच्छेअनुसार दिने दाइजो -दहेज)मा गोमन, अजिङ्गर र करेत जातिका सर्प पनि दिनुपर्ने परम्परा रहेको छ – सुनसरी सखुवागाछीका सपेरा आलम अन्सारी भन्छन् ।
दाइजोमा सर्प अनिवार्य
विषालु सर्प समात्नु जोखिमपूर्ण काम भएपनि विद्यमान परम्परालाई जीवन्तता दिन दहेजमा सर्प उपहार दिने गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।
तरेगना गोविन्दपुरका सपेरा मोहमद गफूर भन्छन् -गरिबीका कारण हाम्रो जातिका युवकहरु पढेलेखेका नभएकाले दाइजोमा सर्प उपहार दिदा चटक देखाएर गुजारा चलाउनका लागि सर्प दिने गरिन्छ ।
अर्को जातिको युवकलाई हामी छोरी दिदैनौ । त्यसकारण जातिगत परम्परालाई कायम राख्न नेटुवा जातिकै केटालाई छोरी दिने गरिएकाले पनि दहेजमा सर्प अनिवार्य भएको छ, अर्का सपेरा अतुल्ला खानको भनाइ छ ।
सर्पलाई डुलाएर चटक देखाउदै त्यसबाट आएको रकमबाट जीवन धान्ने मुख्य आधार भएकाले यस समुदायमा सर्पलाई पेवाको रुपमा लिने गरिन्छ ।
भारत बागडोरा बस्ने सपेरा मोहमद रफिक भन्छन् – मैले पनि छोरीलाई दाइजोमा गोमन सर्प दिए । जुन उनीहरुको गुजारा गर्ने माध्यम भएको छ ।
पन्ध्र/सोर्‍ह वर्षको उमेरदेखि नै यो जातिका मानिसहरु सर्प लिएर नेपालको दुर्गम गाउँमा तथा भारतमा गएर सर्पको चटकी देखाई आम्दानी गर्दै आएका छन् ।
अन्य प्रजातिका सर्पमध्ये सरकारले अजिङ्गरलाई सुरक्षित र दुर्लभ वन्यजन्तुको सूचीमा राखेपनि सपेराहरुले दाइजोमा छोरीलाई अजिङ्गर सर्प दिएपछि केटापक्ष खुसी हुने र अजिङ्गर सर्पबाट कमाइ पनि राम्रो हुने सपेराहरुको भनाइ छ ।
आर्थिक उपार्जनका लागि केटापक्षलाई दाइजोमा सर्प दिएपनि यो गैरकानुनी हो भन्ने कुराबाट अनभिज्ञ सपेराहरु एकै स्वरमा भन्छन् – जे भएपनि हामीले आˆनो परम्परालाई कायम राख्नैपर्छ ।
घुमन्ते जीवन बिताउने नेटुवा जातिका यी सपेरालाई अब बन्ने संविधानमा हक, अधिकार उल्लेख हुनुपर्छ कि भन्ने प्रश्न गर्दा उनीहरुले “कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात” भन्ने टिप्पणी गरे ।
कतारबाट कम्पनी छोडेर जाँदा कति हिसाब पाइन्छ ?
विरोधी दाजुभाइ तथा महोदयहरु यी बस्तीहरु कुन पार्टीका सरकारले बनाएका हुन् ?